1. शब्द मूल
प्रोलिटेरियट मूल रूपमा ल्याटिन शब्द हो र यसको प्रयोग प्राचीन रोम मा शुरू भयो। परम्परागत रूपमा, यो शब्द आफ्न्नो बच्चाहरू बाहेक कुनै पूँजी नभएकाहरूका लागि प्रयोग गरिन्थ्यो। ल्याटिन भाषामा प्रोलेस को अर्थ बच्चा हो।
2. कम्युनिष्ट विचारमा
कम्युनिष्ट मार्क्सवादी विचारधारामा समाज मा दुई मुख्य वर्गहरू छन् - बुर्जुवाझी बुर्जुवा वर्ग, पूँजीवादी र प्रोलिटेरियट मजदुर वर्ग)। मार्क्सवादी दृष्टिकोणमा पूँजीपति वर्गका मानिसहरु सँधै पैसा सङ्कलन गर्न र आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित राख्नमा लागेका हुन्छन र उनीहरूको मुख्य उद्देश्य मुख्य उद्देश्य समाजमा आफ्नो उच्च स्थान र आर्थिक नियन्त्रण कायम गर्नु हो। बुर्जुवाहरूले प्रशस्त उब्जनीको जमिन, कारखानाहरू र आर्थिक गतिविधिका अन्य साधनहरू कब्जा जमाएर बसेका छन्। प्रोलिटेरियटहरू जीवनी चलाउन आफ्नो आय आर्जनका अन्य कुनै साधन नभएको कारण कारखानामा काम गर्न बाध्य छन्। यस तरिकाले, पूँजीपति वर्गले प्रोलिटेरियटको श्रमबाट लाभ उठाउँदछन् र, र प्रोलिटेरियटहरूले कठिनाइ र गरीबीमा बस्नु पर्छ। अन्य विचारधाराले यस मार्क्सवादी दृष्टिकोणमा गल्ती निकाल्छन् ।